Amanani amaphilisi wokudla weGlucophage abiza malini emakhemisi? Izintengo zangempela zomuthi, kuya ngohlobo lokukhululwa > Ukwelashwa nokuvimbela
Amapilisi Okudla Okungabizi - Uhlu Lezidakamizwa Ezisebenziseka Kakhulu
Lesi sidakamizwa singanciphisa hyperglycemiangaphandle kokubangela intuthuko hypoglycemia. Akuvuseleli ukufihla insulinumphumela we-hypoglycemic awuboniswa kubantu abaphilile.
Ukwanda kokuzwela kwama-receptors asepherishi kuya insulin nokulahlwa ushukela amaseli. Ukukhiqizwa kweglue glucose kuncishiswa ngokuvimbela i-glycogenolysis ne-gluconeogeneis. Umuthi uvimbela ukufakwa kweglucose emgodini wokugaya ukudla.
Ngoba I-Metformin isisusa esibonakalayo sokuhlanganiswa kwe-glycogen, umphumela ku-synthetase ye-glycogen. Umthamo wezinto zokuhamba wezinhlobo ezahlukene zabagibeli be-membrane glucose uyanda. Futhi, umuthi unomphumela onenzuzo ku-lipid metabolism: ukunciphisa okuqukethwe okuphelele cholesterol, TG ne-LDL. Ngesikhathi sokusetshenziswa kwe-metformin, iziguli zigcina isisindo esitebekile noma sinciphile ngokulinganisela.
Njengomphumela wokungenisa, ukumunca okugcwele kwento esebenzayo evela emgodini wesisu kuyaphawulwa. Ukudla ukudla kunganciphisa futhi kubambezele le nqubo. Ngaphezu kwalokho, i-bioavailability ephelele ye-metformin ingama-50-60%. Ukuqoqwa okukhulu kwengxenye ku-plasma kutholakele ngemuva kwamahora ayi-2,5.
Emzimbenimetformin Sisakazwa ngokushesha kwezicubu, empeleni ngaphandle kokubopha amaprotheni e-plasma. Umuthi uthola umzimba omncane. Ukucabanga kwenzeka ngosizo lwezinso.
Izinkomba zokusetshenziswa kwomuthi
Izinkomba eziphambili zokusetshenziswa kwomuthi yilezi:
ukwelashwa isifo sikashukela mellitusIzinhlobo ezi-2 uma kwenzeka wehluleka ukudla,
inhlanganisela yokwelapha ne-insulin lapho kunesilinganiso sokukhuluphala, okuhambisana nokuvinjwa kwe-insulin yesibini.
isifo sikashukela sikashukela, i-precom futhi coma,
umsebenzi wokulimala wezinso nowe-hepatic,
izifo ezahlukahlukene ngesimo esibuhlungu,
uphuzo oludakayo, ubuthi obudakayo,
isikhathi sezinsuku ezi-2 ngaphambi nangemva kwezifundo ze-radioisotope noma ze-x-ray ezibandakanya ukwethulwa kwesiqalo esine-iodine esezingeni eliphakathi nendawo,
ukunamathela ekudleni okunekhalori ephansi,
ukuzwela noma ukungabekezeleli umuthi.
Kufanele futhi wenqabe ukusebenzisa umuthi ezigulini ezineminyaka engaphezu kwengama-60 futhi usebenze ngokuzikhandla ngokomzimba onobungozi obukhulu bokuhlakulela i-lactic acidosis.
Lapho welapha ngalo muthi, imiphumela emibi ingahle ibe sesimweni sokuphazamiseka ohlelweni lokugaya ukudla, ngokwesibonelo: isicanucanu, ukuhlanza, ukunambitheka kwensimbi, ukulahleka kokudla, isifo sohudo, ukuthopha njalonjalo. Imvamisa, lezi zimpawu zenzeka ekuqaleni kokwelashwa bese zinyamalala zodwa.
Futhi, ukuphambuka kumetabolism ngesimo se- i-lactic acidosiskudinga ukuhoxiswa kwelashwa. Ukusetshenziswa isikhathi eside kwe-glucophage kungadala hypovitaminosis B12. Ngaphezu kwalokho, amathuba okuthuthukisa i-megaloblastic anemia kanye nokuqhuma kwesikhumba kuhlale.
I-Glucophage amaphilisi, imiyalo esetshenzisiwe (Indlela nomthamo)
Ngokwemiyalo ye-glucophage, umthamo wezidakamizwa ukhethiwe wodwa futhi kuya ngenani le-glucose egazini.
Kulokhu, imiyalo yokusebenzisa i-Glucofage 1000 mg, i-Glucophage 850 ne-500 mg ekuqaleni kokwelashwa incoma ukuthatha umthamo wansuku zonke we-500-1000 mg. Ngemuva kwezinsuku eziyishumi nanhlanu zokwelashwa, ukwanda kancane kancane komthamo kuvunyelwe, unikezwe izinga le-glycemia. Umthamo ojwayelekile wokulondolozwa kwansuku zonke ngu-1.5-2 g, kepha ungabi ngaphezu kwe-3 g. Ukuze unciphise imiphumela emibi ehambisana nepheshana lokugaya ukudla, umthamo wansuku zonke uhlukaniswe ngemithamo emithathu.
Lawa mathebhulethi anconywa ukuthi aphathwe ngasikhathi sinye noma ngokushesha ngemuva kokudla sekuphelele. Isikhathi sokwelashwa sikhethwe ngawodwa. Ukuthatha lesi sidakamizwa ukuze unciphise isisindo, ukugada ochwepheshe kuyadingeka.
Ngesikhathi sokuphatha umuthi i-Glucofage, amacala we-850 mg we-overdose awabonakala. Kodwa-ke, ukuthuthukiswa kwe-lactic acidosis kungenzeka. Izimpawu zokuqala zale nkinga zibonakaliswa ngu: isicanucanu, ukuhlanza, isifo sohudo, izinhlungu emisipha nasesiswini, umkhuhlane njalonjalo. Amacala ayinkimbinkimbi angahambisana nawo ukuphefumula ngokushesha, isiyezi, ukungaboni kahle futhi ukuthuthukiswa kwenhliziyo.
Uma i-lactic acidosis yenzeka, kufanele uyeke ukuthatha i-Glucofage, esibhedlela, uthole inqwaba yama-lactate, ezocacisa ukutholakala kwezifo. Ngokuzayo, kungenzeka usebenzise i-hemodialysis, ekuvumela ukuthi ususe izingxenye ze-lactate nezidakamizwa emzimbeni. Ngemuva kwalokho ukwelashwa okubonakalayo kwenziwa.
Ukusetshenziswa kanyekanye kwalesi sidakamizwa futhi danazole kungaholela ekwakhiweni kwesenzo se-hyperglycemic. Uma kunesidingo, inhlanganisela enjalo idinga ukulungiswa komthamo nokulawulwa kwe-glycemic.
Umthamo ophakeme chlorpromazine kwandisa i-glycemia ngokuncipha kokukhishwa kwe-insulin. Noma yiziphi izidakamizwa ze-hormonal zinciphisa ukubekezelelwa kwe-glucose, ukwandisa i-glycemia, kungadala i-ketosis.
Ukuhlanganiswa ne- "loop" diuretics kugcina ubungozi be-lactic acidosis ngenxa yokwehluleka ukusebenza kwezinso.
Ama-stimulants we-β2-adrenergic receptors ayakwazi ukukhulisa okuqukethwe kwe-glucose egazini. Kulokhu, ukulawulwa kwe-glycemic kuyadingeka, i-insulin inganqunyelwa. Inhlanganisela ye-glucophage nokutholakala kokunye sulfonylureas, insulin, acarbose, salicylates khuphula umphumela we-hypoglycemic.
I-Glucophage yokunciphisa umzimba
Kumele kuqashelwe ukuthi lesi sidakamizwa sithandwa kakhulu phakathi kokulahlekelwa ngabantu abanesisindo. Kodwa-ke, ukubuyekezwa kodokotela kubikwa ukuthi le ndlela yokubhekana nesisindo ngokweqile iyingozi kakhulu futhi ingadala izinkinga ezinkulu. Kodwa-ke, le ndlela kuxoxwa ngayo kwizithangami ezahlukahlukene lapho abasebenzisi banesifiso sokuthi bangayithatha kanjani iGlucophage yokunciphisa isisindo.
Ngasikhathi sinye, abanye abantu batusa ukuthatha i-Glucofage 500 mg, echaza ukuthi umthamo onjalo uzokwanela "ukuqala izinqubo ze-metabolic". Abanye, kunalokho, balule iGlucofage 850 mg, ngoba umthamo ophakeme "uzosheshisa inqubo."
Kuyathakazelisa ukuthi ukubuyekezwa kwesisindo usebenzisa lo muthi akuqukethe ncazelo yemiphumela ethile. Kepha ngasikhathi sinye, kunemibiko yokuwohloka kwempilo yonke, ukukhula kobuhlungu besisu, isicanucanu, ngisho nokuhlanza. Ngakho-ke, ochwepheshe balule ukuthi ukuqala kokuqapha ukondleka kwabo, okufanele kuphelele. Kuyadingeka ukukhipha ubumnandi, ufulawa namafutha ekudleni futhi ukhuphule ukusebenza komzimba.
Ezimweni eziningi, izingxoxo zalo muthi zihambisana nokusetshenziswa kwaso ukuze ulahlekelwe isisindo. Ngasikhathi sinye, okunye ukubuyekezwa kwalabo abanciphisa isisindo mayelana ne-Glucofage kubikwa ukuthi udokotela ubancome le ndlela kubo, ngoba ukudla nokuzivocavoca komzimba akuzange kusize ukuqeda isisindo ngokweqile. Abanye abasebenzisi banesifiso sendlela yokuthatha lo muthi ukuze wehlise isisindo ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, umuntu angathola izindaba zeziguli ezithathe la maphilisi ukuze kubuyelwe umsebenzi wokuzala.
Kodwa-ke, ukusetshenziswa komuthi ngezinhloso ezinjalo akusebenzi njalo. Ngaphezu kwalokho, konke ukubukeza kodokotela neziguli kuqukethe imininingwane mayelana nokukhula kwama-pathologies angathi sína ngemuva kwesizinda sokuhlola okunjalo.
Ukubuyekezwa kwe-Glucofage yokunciphisa isisindo nakho akuchazi imiphumela ethile. Yize iziguli eziphuza umuthi nazo isifo sikashukela, qaphela ukusebenza kwayo nokwehla kancane kancane kwesisindo somzimba.
Izinhlobo Zamaphilisi Okudla
Namuhla, izinkampani ezenza imithi zenze izinhlobo eziningi zamaphilisi okusiza abesifazane (nabesilisa) ukunciphisa umzimba. Wonke amaphilisi okudla abizayo futhi angabizi - ahlukaniswe ngombandela ngamaqembu ambalwa, ngalinye linomphumela ohlukile emzimbeni. Ngaphambi kokukhetha iphilisi, kufanele uzijwayeze ngokuqondiswa kwemiphumela yazo, imiphumela emibi. Kukhona amaqembu anjalo wamathuluzi:
ukuhlinzeka ngesimo satiety,
Ama-laxatives kanye nama-diuretics.
Uma ubona isenzo ngendlela yesaphulelo esihle esitolo se-inthanethi, ungagijimeli uku-oda ngokushesha lesi sidakamizwa ngeposi, noma ngabe kubiza ngendlela eshibhile ngangokunokwenzeka, futhi ngisho nokulethwa kwamahhala. Khumbula njalo ukuthi ezinye izindlela zokunciphisa isisindo azikwazi nje ukungasebenzi, kodwa futhi zibe yingozi empilweni. Lokhu kufaka phakathi:
lezo ezinciphisa ukusebenza kwamaseli we-CNS,
ama-ejenti akhulisa ubungozi bokudangala noma ukuthambekela kokuzibulala,
ukuba nezici zokuphamba emzimbeni.
Amaphilisi wokudla ashibhile emakhemisi
Amaphilisi ekhemisi awagcini nje ngokuthenga, kodwa futhi akhethwa kakhulu phakathi kwabathengi. Isibonelo, abantu abaningi bathenga amalahle e-activated, ngoba kuyipeni lokunciphisa isisindo, okuthi, umahlulela izibuyekezo, kunikeze umphumela omangazayo. Kufanele kuqashelwe ukuthi i-microcrystalline cellulose (MCC) ikhiqiza umphumela ofanayo - i-standardizing ukugaya, esiza ukunciphisa isisindo somzimba. Lapho ubheka imali yesabelomali yokuncipha kwesisindo emakhemisi, naka ukukhishwa kwetiye eliluhlaza ku-powder, okungashisi kuphela amafutha ngaphansi kwesikhumba, kodwa futhi kulwa ne-cellulite.
Izithako zokudla ezishibhile zokunciphisa umzimba
Izithako zokudla zihlanganisa iqembu lama-parapharmaceuticals abangenaso isimo sezidakamizwa. Ukuqanjwa, kanye nentengo yesengezo esisebenza ngokusebenza, zingashiyana - zizoshibhile noma zibize, kuya ngomkhiqizi. Ezinye izithako zokudla ezishibhile zokunciphisa umzimba ziyasiza ngempela, ukuba nomphumela omuhle emzimbeni ngokwenza kabusha ukulethwa kwamavithamini nezakhi ezikuwo, futhi ezinye azisizi ngalutho ukufeza le nhloso. Kunoma ikuphi, ngaphambi kokuthenga amaphilisi anjalo, kufanele uzijwayeze ngokucophelela ukwakheka kwawo.
Asebenza kanjani amaphilisi okudla?
Ngokuvamile, kuphephile ukusho ukuthi njengeresiphi yendawo yonke eshisa amanoni ayikho. Lokhu kungenxa yokuthi umzimba ngamunye usabela ngendlela ehlukile ekutheni bazama "ukuthatha" izinqolobane zabo. Kodwa-ke, ngokuya ngokubuyekezwa, umphumela wamaphesenti ayikhulu uyatholakala, amaphilisi wokudla angabizi. Ukuthatha nezidakamizwa ezishibhile kahle kuzoqinisekisa ukuthi zisebenza ngendlela oyidingayo. Indlela yokusebenza yawo wonke amaphilisi wokudla ashibhile ihlukile: abanye basusa uketshezi ngokweqile, abanye bahlanza amathumbu noma banikeze umuzwa wokugcwala, njll.
Lolu hlobo lwekhambi lithandwa kakhulu kulabo abafuna ukunciphisa umzimba. Izidakamizwa ze-diuretic zokuncipha kwesisindo ziqukethe okukhishwa kwesitshalo okususa uketshezi emzimbeni, ngenxa yalokho ukwehla kwesisindo somzimba. Okubi kwamathebhulethi we-diuretic ashibhile futhi abizayo ukuthi ngemuva kokumisa ukusetshenziswa kwamakhilogremu, futhi ngenxa yokulahleka kwamanzi, kubonakala buthakathaka kwemisipha, ukusebenza kwenhliziyo kukhubazekile. Uma uthatha isinqumo sokunciphisa umzimba usebenzisa lezo zindlela, nikeza ukukhetha kokuphephile:
I-Furosemide - amaphilisi adumile adumile phakathi kwamantombazane ane-anorexia. Ukuthatha amaphilisi ngokuya ngezincomo ezisezimiyalweni, ungasiza umzimba ukuthi ususe amanzi ngokweqile.
Torasemide- amaphilisi wokudla ashibhile anomphumela we-diuretic, ubude bawo obude kunokaFurosemide.
Lapho umzimba uhlanzwa ngokudla okugaywe namanzi ngokweqile, le yindlela ephephile yokunciphisa umzimba. Kungcono ukuthi uphuze imali enjalo isikhashana, ngoba ukusetshenziswa isikhathi eside kungadala ingozi yokuphuma kwezinto ezinenzuzo. Kunamaphilisi wokudla wokuhlanza anjengalawa:
I-Turboslim. Amaphilisi akhangisiwe, kepha ashibhile ane-laxative effect. Amakhandlela asusa ngokushesha ukudla okudliwayo, ngenxa yalokho amakholori angagcinwanga ngendlela yamafutha. Umuthi uyama ngokushesha ngemuva kokuqedwa kwenkambo yokuphatha.
I-Phytolax. Amacwecwe athungwayo avuselela amathumbu ngenxa yokwanda kwe-peristalsis, ukwenziwa kwe-sorption okwenziwe ngcono kanye nokuphuma emzimbeni wesitho sokugaya ukudla.
Amaphilisi wokudla ashibhile futhi aphumelelayo, anokwakheka okulinganiselayo, angawachitha ngempela amafutha akhona, kanti asazovimba ukunqwabelana okusha. Kodwa-ke, uma usebenzisa lolu hlobo lomuthi, kuyadingeka ukulungisa lokhu kudla: yeka i-soda, amaswidi, ukudla okunamafutha. Isibonelo, kunezidakamizwa ezivuthayo ezinjengamanani abizayo:
ULida. Umuthi waseChinese osithako esisebenzayo yi-sibutramine (i-amphetamine derivative). Ngenxa yale ngxenye enamandla, umzimba ngeke ukwazi "ukuqoqa" ngama-deposits anamafutha.
I-Orsoten. Umuthi owaziwa kancane, uqukethe umuthi okwelapha, okuyisenzo okuhlose ngaso kuphela ukwehlisa isisindo. Ukusebenza kwaso kulele ekusetshenzisweni kwamafutha ahlanganisiwe futhi kuvimbele ukuqongelela okusha.
Amaphilisi anjalo anomthelela oqinile ohlelweni lwezinzwa, ngenxa yalokho umuzwa wokulamba udilizwa. Izidakamizwa ezicindezela isifiso sokudla zibizwa nangokuthi ama-anorectics, futhi zilungele kuphela labo abadla ngokweqile njengembangela eyinhloko yokukhuluphala. Ngokuthengisiwe kunamaphilisi ahlukahlukene anciphisa isifiso sokudla futhi acindezela umuzwa wokulamba, phakathi kwawo yilawa:
I-Reduxin - Enye yezindlela ezaziwa kakhulu zokunciphisa umzimba. Into esebenzayo yamathebulethi yi-sibutramine. Ngokusebenza esikhungweni sokugcwalisa esitholakala kwi-hypothalamus, into yandisa imiphumela ye-norepinephrine ne-serotonin, ngenxa yokuthi umuzwa wendlala uvinjelwe isikhathi eside.
IGoldline. Umkhiqizo oshibhile waseNdiya odume ngokudla izazi zezempilo, ongawuthenga ekhemisi ngencwadi kadokotela. Ama-capsel we-Gelatin aqeda indlala yomuntu, futhi lokhu kunciphisa ukuphuza ikhalori.
Ama-carbohydrate Ukuvimbela Amaphilisi
Uma ubheka izidakamizwa ezingabizi zokunciphisa umzimba, kufanele unake ngokukhethekile "abavimbeli." Indlela yokusebenza yabo ukuthi bavimba ama-enzyme adiliza ama-carbohydrate, noma ababopha ngokungenakuphikiswa ezingxenyeni zokudla, bese besuswa emzimbeni bengafakwanga. Ama-blocker amahle futhi ashibhile afaka:
I-Glucobay. Ngokuphumelelayo zivimba ukugaya kwama-carbohydrate nokufakwa kwawo emathunjini amancane. Umphumela wokusetshenziswa kwethuluzi elinjalo uzoba ukwehla kokunyuka kokuxineka koshukela egazini, okungena emzimbeni ekudleni okuqukethe i-carbohydrate.
I-Glucophage- kubhekisa kumaphilisi wokudla ashibhile angenayo imiphumela emibi. Isithako esisebenzayo yi-metformin, ehlisa izinga le-glucose ne-cholesterol, okuvame kakhulu kuyo abantu abaphezu ngokweqile.
Ungazithatha kanjani izidakamizwa ukuze unciphise isisindo
Yonke imikhiqizo eshibhile yokudonsa inemiyalo nezincomo zomenzi mayelana nomthamo womuthi. Kodwa-ke, cishe zonke izinkampani zixwayisa ukuthi kuzoba lula kakhulu ukusho kahle kumakhilogremu uma, ngaphezu kwamaphilisi, umuntu ofuna ukwehlisa umzimba uzolinganisa ukudla kwakhe, uzowusiza umzimba wakhe ukuba ube nokuzilolonga ngokomzimba, ngisho nezincane.
Ukudla Amaphilisi Okudla
Inkambo eyodwa idinga amaphakethe amaningana amaphilisi, futhi izindleko zezidakamizwa ezithile zingafinyelela kuma-ruble ayizinkulungwane eziningana, ngakho-ke abaningi bafuna izidakamizwa ezishibhile zokunciphisa umzimba.Okungabizi, kepha okusebenzayo kufaka:
Incazelo: isithako esisebenzayo i-fiber. Esiphaketheni samathebhulethi ayi-100 ka-500 mg.
Okuhle: kuyasiza ekwehliseni isifiso sokudla ngenxa yokuthi i-cellulose iyavuvukala esiswini, ukuqina kwamathumbu kuyathuthuka, ngakho-ke umuntu uyeka ukuhlukunyezwa.
Ukuthengwa: ukusebenza kohlelo lokugaya kuphazamiseka, kanye namafutha, izakhi zamakhemikhali ezidingekayo nezakhi zomzimba ziyasuswa emzimbeni.
Intengo: kusuka kuma-ruble ayi-135.
Isimilo: I-Guarana, i-algae extracts, i-bromelain, amakhambi kanye nokukhishwa okuvela ku-citrus kuyingxenye.
Okuhle: kucindezela isifiso sokudla, kuthuthukisa ukugaya, kunomphumela oqabulayo.
Isidumbu: kungakuhle ukukuthatha ekhaya kuphela.
Intengo: kusuka kuma-ruble angama-209.
Incazelo: Amaphilisi angama-120 mg No. 21, izithako ezisebenzayo - i-caffeine, i-oligofructose, i-L-carnitine.
Izinzuzo: amaphilisi ashibhile okwehlisa isisindo ngempumelelo, athuthukisa ukusebenza ngokomzimba nangokwengqondo, ukuvutha kwamafutha, asiza ukukhulisa izicubu zomzimba, ukufaka isandla ku-satellite esheshayo.
Cons: ithuluzi linikeza umphumela ongasebenzi.
Intengo: kusuka kuma-ruble angama-145.
Incazelo: Amaphilisi angama-120 mg, kwiphakeji angaba ama-21, 42 noma ama-PC ama-84., Into esebenzayo i-orlistat.
Izinzuzo: kwephula amafutha angena emzimbeni ngokudla okusha, ngemuva kwalokho amshiye umuntu ngokwemvelo.
Cons: ngemuva kwenkambo yokuphatha, ukubukeka kobuthakathaka, ukungakhululeki kungenzeka.
Intengo: kusuka kuma-ruble angama-646.
5. I-buckthorn yaseMelika:
Isimilo: Amathebhulethi ayi-10 ka-0,5 mg ngamunye, amakhambi ahlukahlukene afakiwe
Izizathu: ukusheshisa i-metabolism, ukunciphisa isifiso sokudla, ukwenza buthaka amathumbu.
Ukuthengwa: ukuxhaswa kungadala ukuqwasha, ukwehluleka, ukuhlukunyezwa kwenhliziyo, ukushaya kwenhliziyo, ukwethuka.
Intengo: kusuka kuma-ruble angama-30.
Ungawathenga kuphi amaphilisi wokudla
Zonke izidakamizwa ezishibhile ezixoxwe ngenhla zingathengwa emakhemisi eMoscow naseSifundeni saseMoscow. Iningi lazo lisatshalaliswa ngaphandle kadokotela, ngakho-ke wonke umuntu angaba-oda, ngoba kwimodi ye-inthanethi lokhu kungenziwa ngisho naseSt. Petersburg, nangokulethwa ekhaya. Labo abafuna ukuthenga amaphilisi we-slida we-Lida kufanele bazi ukuthi athengiswa emakhemisi, kodwa ungahlala u-oda ukufakwa esitolo online.
Inani lamaphilisi okudla
Kuzo zonke izinhlobo zezindlela ezishibhile zokunciphisa isisindo, ikhabhoni esebenzayo ayikwazi ukujabula ngokushibhile kwayo - iphakethe elilodwa libiza cishe ama-ruble angama-20 ngokwesilinganiso. Amanani ezinye izidakamizwa nawo mancane:
Inani lentengo emakhemisi eMoscow, ama-ruble
I-Furosemide (40 mg 50 ama-PC.)
I-Torameside (5 mg 30 ama-pcs.)
I-Turboslim (itiye lokuhlanza)
Ama-Fitolaks (izibhebhe ezihlafunwayo ze-0.5 g no-20)
Kusuka ku-990 (kumakhemikhali online)
I-Orsoten (i-120 mg 21 ama-pcs.)
I-Glucobai (100 mg No. 30)
IGlucophage (500 mg No. 30)
I-Orsoslim (0.39 mg No. 56)
UMaria, osebenza ngokudla okunempilo Ngingumuntu odla ukudla okuneminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho, ngakho-ke ngincoma amaphilisi okudla ezigulini zami kuphela lapho kungekho okunye okubasiza khona. Ukusetshenziswa kwemikhiqizo eminingi yasekhemisi kungadala ukungalingani kwe-hormonal, kuphazamise uhlelo lokugaya ukudla, kepha ngasikhathi sinye kungathinti ungqimba lwamafutha uqobo.
UFedor Ivanovich, udokotela wezokwelapha iziguli eziningi zibuza ukuthi aphephe kangakanani amaphilisi okudla. Kulokhu ngihlala ngiphendula ukuthi amalungiselelo anjalo awathandeki kulabo abangakwazi ukudlala ezabo imidlalo - kungani kukhungathekisa umzimba? Yebo, ngosizo lwabo, ukuwohloka kwamafutha kwenzeka, kepha ngokuvamile ungenza ngezindlela ezinobumnene kakhulu, ngokwesibonelo, ukudla.
U-Igor, ongumondli wezempilo. Amakhemisi akwe-inthanethi ahlukanise izidakamizwa eziningi zaseThailand, amaShayina, ngokufana nangesenzo - zonke izinto ezisebusweni bawo kuhloswe ngazo ukusheshisa ukuqhekeka kwamafutha. Nginombono omuhle ngemikhiqizo enjalo, kodwa kuphela uma iziguli zami zihlolwa kuqala, futhi ngibahlukanisa ngaphandle ubungozi bezempilo.
Ukubuyekezwa kokunciphisa umzimba
UMarina, amaphilisi we-Saw Modelform oneminyaka engama-45 ubudala, umphumela ujabule kakhulu - amaphilisi awangisizanga nje kuphela ukuqeda isifiso sokudla ngesihluku, kodwa futhi waba nomthelela kulungiso lokudla, ukwenqatshwa kokudla okungenamsoco. Ukuphela kwesidakamizwa lesi, ngingabona ukuthi kungekudala amakhilogremu aqala ukubuya, ngakho-ke isifundo kufanele siphindaphindwe ngezikhathi ezithile.
U-Irina, oneminyaka engama-28. Umngane wanginikeza uReduxin, ngahlabeka umxhwele ngomphumela - kwathatha ama-6 kg ngenyanga. Ngisola ukuthi bangaba imilutha, ngoba i-sibutramine isohlwini lwezakhi, futhi lokhu kuthathwe ku-amphetamine. Nginqume ukuyeka ukuyithatha, kepha izithombe zami zamanje zingiphoqa ukuthi ngihambe ngiyofuna elinye ikhambi, ngenhlanganisela ephephile futhi ngiqhubeke nokunciphisa umzimba.
Umuthi uyatholakala ngesimo samathebulethi aphekwe ngenhlanganisela ekhethekile yokuphatha kalula. Kunemithamo eminingana yento ebalulekile esebenzayo - i-metformin. Okungukuthi ama-milligram angama-500, ama-850 nenkulungwane.
Odokotela banquma umuthi wabashukela abanesifo sohlobo lwesibili. Umgomo ukwehlisa amazinga e-insulin. Igama lingahluka, kuye ngomenzi, kepha into esemqoka ukugxila entweni esebenzayo.
Umgomo we-Glucofage ekunciphiseni isisindo
I-insulin yi-hormone ekhiqizwa ama-pancreas, umsebenzi ophambili wawo ukuqoqwa kwamandla emzimbeni - amanoni.
Umuthi wehlisela amazinga e-insulin, wehlise inani le-glucose ecijwa yisisu, ixazulula izinqubo ze-metabolic futhi uvimbele ukunqwabelana kwamaseli wamafutha ezicutshini ngenxa yezinga le-hormone elincishisiwe.
Ngasikhathi sinye, akukho mphumela ezinqubweni ezenziwa kumanyikwe, okuvumela abantu abangenaso isifo sikashukela ukuthi basebenzise umuthi.
Kuyadingeka ukugqamisa izinzuzo eziningi eziningi:
Ukwenza kusebenze ukushisa kanye ne-oxidation yamafutha omzimba.
Ukunciphisa inani lekhabhoni ecijwe yizindonga zepheshana lesisu.
Ukuvuselela ukucubungula okusebenzayo kwe-glucose ngezicubu zemisipha.
Yehlisa i-cholesterol yegazi.
Ngenxa yalokhu, ukwehla kancane, kodwa okuqinisekile futhi okungapheli kwesisindo somzimba ngenxa yokwehla kwamafutha omzimba.
Contraindication kanye nemiphumela emibi
Umuthi unezindlela eziningi zokuphikisana ukuze zisetshenziswe, ngakho-ke ngaphambi kokuthi uqale uthathe i-Glucofage yokunciphisa isisindo, kufanele ufunde lolu hlu ngokucophelela.
Kwenqatshelwe ukuphuza amaphilisi wabantu abahlushwa yi:
isifo sohlobo lwesibili, okungakhiqizwa ngalo i-insulin yalo,
ukwehluleka kwezinso noma esinye isifo sezinso esikhulu,
umsebenzi wesibindi ongasebenzi kahle,
Izifo ezinkulu zesistimu yenhliziyo.
Ayinconywa futhi kumacala alandelayo:
isikhashana ngemuva kokuhlinzwa noma isifo esithathelwanayo,
kwenqatshelwe ngokuphelele komama abakhulelwe nababambisayo,
ukuba khona kokungabekezeleli komuntu ngamunye kwisithako esisebenzayo.
Inani lemiphumela emibi engathandeki lincane futhi bavela ezinsukwini zokuqala zokwamukelwa.
Kepha kufanelekile ukwazi ngabo, ngoba ngokuboniswa okunjalo, kufanele uyeke ukuthatha amaphilisi we-Glucophage:
Ukuqothulwa kokufisa kwemvelo kokudla.
Ukuvela kokunambitheka kwensimbi emlonyeni.
Ukuqunjelwa, isicanucanu, noma isisu sohudo.
Ukuqhuma komzimba emzimbeni noma ukubonakala kobuhlungu esiswini.
Funda ukuzivocavoca ukunciphisa umzimba kuwebhusayithi yethu.
Ukubuyekezwa ngokudla kwamaqanda kukaMaggi ku-athikili. Izici zokudla namamenyu amasonto amane.
Mayelana nokuthi ubhukuda kanjani echibini ukuze wehlise isisindo, lapha.
Akunakwenzeka ukuthola uhlelo lokusebenzisa i-Glucofage yokunciphisa isisindo emiyalweni esemthethweni. Kwenzelwe isidakamizwa esinye.
Kodwa ngokwamandla akhe isethi encane yezincomo:
Isikhathi sokuphathwa okuqhubekayo kwamatafula sisukela ezinsukwini eziyi-10 kuye kwezingu-21.
Uma uphuza kancane, umphumela ngeke uzwe.
Ngakolunye uhlangothi, ukuphuza isikhathi eside kuzoholela ekuluthweni komlutha, okubuye kunciphise umphumela wokwelapha ube yi-zero.
Ikhefu phakathi kwezifundo kumele okungenani libe izinyanga ezimbili.
Umthamo wansuku zonke usukela ku-500 kuya ku-3000 milligrams wento esebenzayo futhi ukhethwa ngawodwana.
Kungcono ukuqala ngenani elincane futhi uma ungekho imiphumela emibi echazwe ngenhla, umthamo ungandiswa.
Izibhebhe ze-Glucophage zigezwa ngenani elikhulu loketshezi olungenakhabhoni, ukuphuza kwenzeka kathathu ngosuku ngesikhathi noma ngokushesha ngemuva kokudla.
Ngesikhathi sokulashwa, kwenqatshelwe ukusebenzisa ukudla okune inani eliphansi lama-kilojoule ekudleni.
Ngakolunye uhlangothi, ukudla okune-khabhoni eningi (amaswidi), iziphuzo ezinekhabhoni, nezithelo ezomisiwe esikhathini esiningi kuholela ekuphazamisweni kokugaya ukudla nokuhlanza.
Kulokhu, umphumela omuhle wokuthatha uyancishiswa.
Imidlalo ayinqatshelwe, ngaphezu kwalokho, abasubathi abaningi basebenzisa iGlyukofazh lokho okubizwa ngokuthi “ukomisa” ngaphambi kokuqala.
Ngamanye amagama, shayela isisindo ngokuphuthumayo kumapharamitha adingekayo.
Ukuze uqonde ukuhleleka kwamanani entengo yomuthi, imininingwane yayisetshenziswa kwenye yamakhemikhali e-inthanethi athandwayo akhiwe eMoscow.
Umenzi "Nycomed" umelwe, kepha amanani avela kwezinye izitshalo ahlukile kancane.
Inani lamaphilisi ngephakethe ngalinye
Izibhebhe ze-glucofage Unqunu 500 mg 30 127,00
850 mg 30 131,00
1000 mg 30 192,00
500 mg 60 170,00
850 mg 60 221,00
1000 mg 60 318,00
Isiphetho esilula siziveza etafuleni ukuthi ithuluzi selithengile. Akunazinkinga ngokutholakala kosokhemisi noma.
Ukubuyekezwa ukuthatha umuthi
Ngakho-ke, kusalokhu kugxile kuphela kuzibuyekezo zabantu abathatha amaphilisi.
Umngani uncome ukuzama i-Glucofage yokunciphisa umzimba. Isisindo sakhe sasingamakhilogremu angama-80, ngesilinganiso sama-60. Wayethi masonto onke kuthatha ama-2,5 kilos. Uthathe amasonto amathathu. Nginamakhilogremu angama-74, kodwa bengifuna okungaphansi kwama-60, okungukuthi, angihlushwa ukukhuluphala kakhulu, kepha kunamafutha amancane.
Ukudla ezimeni ezinjalo akunamsebenzi ngokuphelele, ngakho-ke nginqume ukukuzama. Izinsuku zokuqala zafika isicanucanu, kepha zadlula. Wezwa ukwehla kwesifiso sokudla, ejabule ikakhulukazi ngokuntuleka kwesifiso esingenakuphikiswa sokuphonsa okuthile emlonyeni wakhe kusihlwa.
Sekuphele amasonto amabili ngiphuza amaphilisi futhi ngehla amakhilogremu amathathu, okungijabulisa kakhulu. Ngiyayincoma!
-Sveta, 27 weminyaka
Ngokwenyuka kwamasentimitha angama-165 isisindo esingamakhilogremu ayi-100. Ngifunde ukubuyekezwa futhi nganquma ukuzama iGlucofage. Azange ngibe nemiphumela emibi engangingabazi, kepha emavikini amathathu angitholanga mphumela.
Abangani bethule i-treadmill, ngigijima amakhilomitha ama-2 ngosuku, amakhilomitha ama-2, amahlandla ama-3 ngesonto, ayeke ukukhuphuka ebusuku esiqandisini futhi isisindo siqale ukuncipha! Ungakholelwa ezibhebheni eziyisimangaliso, imfundo yokomzimba kuphela nokudla okuhle.
U-Olga, oneminyaka engama-24
Ngaphambi kokuthatha umuthi lo besinesisindo esingamakhilogremu ayi-124 sikhuphuke ngo-170. Bengilokhu ngiphuza amaphilisi cishe izinyanga eziyisithupha (nokuphazamiseka kwezifundo). Manje amakhilogremu angama-92. Angikhumbuli noma yikuphi ukuphazamiseka okuthile (isicanucanu, njll). Angisebenzisanga lutho olumnandi ngenyanga yokuqala nesigamu kwenye indawo. Manje sengizivumela ukuthi ngizijabulise ngesinye isikhathi.
Waqala ukugijima kancane futhi wapompa (isikhumba saqala ukugcwala). Angazi ukuthi yini eye yasiza kakhulu - ukudla ngemfundo yokudla noma amaphilisi, kepha kuba khona umphumela.
-Sergey, iminyaka engama-35
Ukucindezelwa njalo nokuhlazeka kuholele ekutheni ukhuluphele (ujabule, njengabaningi). Impilo yathuthuka kancane, namaphawundi angeziwe asala. Ukudla nemishini yokuzivocavoca akuyona eyami, ngakho nginqume ukuzama iGlucofage. Ngiphuze izifundo ezi-2 ngashiya amasayizi ama-2 wezingubo. Manje angemukeli, kepha isisindo sihlala sizinzile. Azange ngizwe nemiphumela emibi kakhulu, kanye nezinkinga zempilo.
-Irina K., oneminyaka engama-31
Amaphilisi we-Glucophage anqunywa udokotela oyi-endocrinologist. Njengamanje sengibathathe amasonto ama-2. Ngiqale ngama-milligrams angama-500, manje sekuvele kungu-1000. Izinsuku ezimbili zokuqala nganginephutha elincane futhi ngangivakashela indlu yangasese njalo. Manje yonke into ibonakala isizinzile.
Umphumela namuhla ngamakhilogremu ambalwa kubomvu, kepha uma ukwahlulela ngezingubo, amavolumu eseqalile ukuhamba. Lokhu kujabulisa kakhulu, ngaphambi kokuthi kube neminyaka yokulwa nokuba nokukhuluphala, kepha akubanga namiphumela ebonakalayo.
Ngubani onqume ukusebenzisa lesi sidakamizwa, ngikweluleka ukuthi ungabi namahloni futhi ubonane nodokotela. Udokotela wangitholela ishadi, wahlolwa izifo zenhliziyo nezinso, futhi kwahlolwa neshukela likashukela egazini.
Akukho ukudla okukhethekile, kwakudingeka ukukhipha ubumnandi nefulawa (itiye elinesipuni sikashukela akubali), angiziphuzi iziphuzo ezinekhabhoni. Ukusuka kwezemidlalo - ukuhamba amabanga emoyeni omusha, kodwa ngake ngazama ukukwenza lokhu phambilini. Ngiyincoma kakhulu!
-Tatyana N., oneminyaka engama-37
Ngithatha udaba lokuphuza amaphilisi kashukela uma singenaso lesi sifo kubi kakhulu. Umuthi ngempela unciphisa ukumuncwa kwe-glucose emgudwini we-gastrointestinal, okuthi ngenkathi yesikhashana kuholele ekunciphiseni kwesisindo. Kepha!
Ukuntuleka kweglucose kuholela ekutheni umzimba uqala ukukhiqiza uwedwa. Ngasikhathi sinye, kuhanjiswa ngezicubu zomzimba. Ukweqisa okuseleyo kungenzeka kuphela ngosizo lokuzivocavoca okukhulu ngokomzimba. Njengomphumela, kukhona ukunqwabelana kwe-lactic acid, okubandakanya isifo esiyingozi - i-lactic acidosis.
Ukuqhathanisa kalula ekufezeni imiphumela yokuqala (ukunciphisa isisindo esincane) kuholela ekutheni umuntu eyeka ukuqapha izondlamzimba nendlela yokuphila. Ngemuva kwakho konke, kulula ukuthenga amaphilisi, unamathela ekudleni okulula. Kepha ukudla njalo i-glucophage ngumuntu onempilo kuzosheshe kuholele ekuphazamisekeni kwe-metabolic. Futhi le yindaba enzima kakhulu.
Ngincoma ukuthi ngibhekise kumathebhulethi anjalo uma kunesimo esiphuthumayo futhi kuqondiswe udokotela kuphela!
USergey Nikolaevich, udokotela - i-endocrinologist
IGlucophage ingahle ibekelwe abantu abanesifo sikashukela. Kepha kuphela uma kunokuphambuka kokujwayelekile ngokuya ngamazinga we-insulin. Umuthi ubhekana nomsebenzi wawo, futhi nenani le-hormone libuyela kokujwayelekile.
Ngenxa yalokhu, imetabolism iyathuthuka futhi inqubo yokuncipha kwesisindo yenzeka. Kepha lokhu akuwona umsebenzi oqondile wezindlela, kepha umphumela wokujwayelekile kwezinqubo zangaphakathi. Uma kungenazinkomba zokwelashwa zokuthatha, awukwazi ukuphuza amaphilisi.
-Elena S., udokotela wezifo zemvelo
Okudingayo ukwazi nge-Glucofage kuchazwe kuvidiyo.
Ukwakheka nefomu lokukhululwa
Amathebulethi efakwe kumafilimu - 1 ithebhulethi:
izinto ezisebenzayo: metformin hydrochloride - 500/850/1000 mg,
iziwombe: i-povidone - 20/34/40 mg, i-magnesium stearate - 5 / 8.5 / 10 mg,
i-movie sheath: 500 ne-850 mg amaphilisi - i-hypromellose - 4 / 6.8 mg, amaphilisi ayi-1000 mg - i-Opadry emsulwa (i-hypromellose - 90,9%, i-macrogol 400 - 4.55%, i-macrogol 800 - 4.55%) - 21 mg
Amathebulethi embozwe ngefilimu, 500 mg. Amacwecwe ayi-10 noma angama-20. esikhwameni se-PVC / aluminium foil, amabhuliki ama-3 noma ama-5 afakwa ebhokisini lekhadibhodi. 15 ithebhu. ku bl. I-PVC / i-aluminium foil, 2 noma 4 bl. ibekwe ebhokisini lekhadibhodi.
Amathebulethi embozwe ngefilimu, 850 mg. 15 ithebhu. esikhwameni se-PVC / aluminium foil, ama-2 noma 4 ama-blist afakwa ebhokisini lekhadibhodi. Izibhebhe ezingama-20 ekuqhumeni kwePVC / aluminium foil, 3 noma 5 bl. ibekwe ebhokisini lekhadibhodi.
Amathebulethi embozwe ngefilimu, 1000 mg. Izibhebhe eziyishumi esikhwameni se-PVC / aluminium foil, ama-3, 5, 6 noma ama-12 blitter afakwa ebhokisini lekhadibhodi. 15 ithebhu. ekuqhumeni kwePVC / aluminium foil, 2, 3 noma 4 bl. ibekwe ebhokisini lekhadibhodi.
Kusetshenziselwa uphawu "M" ebhokisini lokuqhuma kanye nekhadibhodi ukuvikela ekuphazamisweni.
Noma esimweni sokupakisha i-drug Nanolek
Amathebulethi embozwe ngefilimu, 500 mg. 15 ithebhu. ekuqhumeni kwePVC / aluminium foil, 2 noma 4 bl. ebhokisini lekhadibhodi, amaphilisi angama-20. ekuqhumeni kwePVC / aluminium foil, 3 bl. ibekwe ebhokisini lekhadibhodi.
Amathebulethi efakwe kumafilimu, i-1000 mg. Amacwecwe ayi-15 ekuqhumeni kwePVC / aluminium foil, 2 noma 4 bl. ibekwe ebhokisini lekhadibhodi.
Ithebula le-500 ne-850 mg: elimhlophe, eliyindilinga, ele-biconvex, elenziwe ngamafilimu, esigabeni sesiphambano - isisindo esimhlophe esimhlophe.
Amathebhulethi ayi-1000 mg: amhlophe, i-oval, i-biconvex, efakwe kumafilimu, anezinhlangothi zombili futhi aqoshwe ngo-"1000" ngakolunye uhlangothi, isisindo esimhlophe esingenangqondo esigabeni sesiphambano.
Ukungena nokusatshalaliswa. Ngemuva kokuphathwa ngomlomo, i-metformin idonswa emzimbeni wokugaya ukudla. I-bioavailability eyi-50-60%. I-Cmax (cishe i-2 μg / L noma i-15 μmol) ku-plasma ifinyelelwa ngemuva kwamahora ayi-2,5. Ngokufakwa kanyekanye kokudla, ukumuncwa kwe-metformin kuyancipha futhi kuyabambezeleka.
I-Metformin isatshalaliswa ngokushesha ezicutshini, cishe azibophele kumaprotheni e-plasma.
I-Metabolism kanye ne-excretion. It is metabolised to a weak kakhulu degree and excreated by izinso. Ukucaciswa kwe-metformin ezifundweni ezinempilo yi-400 ml / min (izikhathi eziphindwe kayi-4 kuneClininine), okubonisa ubukhona bokucashelwa kweshubhu okusebenzayo. I-T1 / 2 icishe ibe ngamahora ayi-6.5. Ngokuhluleka kwe-renal, i-T1 / 2 inyuka, kunengozi yokuqalwa komuthi.
I-Metformin inciphisa i-hyperglycemia ngaphandle kokuholela ekuthuthukisweni kwe-hypoglycemia. Ngokungafani nokususelwa kwe-sulfonylurea, ayivuseleli ukugcinwa kwe-insulin futhi ayinamphumela we-hypoglycemic kubantu abaphilile. Kwandisa ukuzwela kwama-receptors aphathelene ne-insulin nokusetshenziswa kweglucose ngamaseli. Yehlisa ukukhiqizwa kwe-glucose yesibindi ngokuvimbela i-gluconeogenesis ne-glycogenolysis. Ibambezela ukumuncwa kwamathumbu ushukela. I-Metformin ivuselela ukwakheka kwe-glycogen ngokwenza izinto nge-glycogen synthetase.
Khuphula umthamo wokuhamba wazo zonke izinhlobo zabathutha be-membrane glucose. Ngaphezu kwalokho, inomphumela onenzuzo ku-lipid metabolism: inciphisa okuqukethwe yi-cholesterol ephelele, i-LDL ne-triglycerides. Ngenkathi uthatha i-metformin, isisindo somzimba wesiguli sihlala sizinzile noma sincipha ngokulinganisela. Izifundo zemitholampilo zikhombise ukusebenza ngempumelelo kwezidakamizwa iGlucofage® ekuvinjelweni kwesifo sikashukela ezigulini ezine-prediabetes ezinezici ezengeziwe zobungozi ekuthuthukiseni uhlobo lwe-2 mellitus yesifo sikashukela, lapho ukuguquka kwendlela yokuphila kungavumeli ukulawulwa okwanele kwe-glycemic kutholakale.
Ngabe uju luvunyelwe abanesifo sikashukela noma cha
Isidakamizwa Abipim: imiyalelo yokusetshenziswa
Ukunqanyulwa umlenze wesifo sikashukela: ukususwa konyawo noma uzwane
Izinkomba zokuhlaziywa komchamo ku-mellitus yesifo sikashukela kanye nokukhishwa kwemiphumela
Imichilo Yokuhlola IGlucometer
Ngingakwazi ukuphuza utshwala nesifo sikashukela?
Ungawehlisa kanjani amakhambi we-cholesterol yegazi
InsulinImpilo enesifo sikashukelaImikhiqizo yabanesifo sikashukelaIzifo Zesifo SikashukelaOkunyeIngcindeziUkwelashwa nokuvimbelaIsifo sikashukela ezinganeni nasentsheniIzinhlobo NezinhloboUkulawulwa kwesifo sikashukela
Ungawabala kanjani amayunithi esinkwa sohlobo 1 nohlobo 2 sikashukela?
Kungaba khona yini isifo sikashukela kusuka kumaswidi: kungani kuvela
Aspirin Cardio kanye Cardiomagnyl